You Are Here: Home → Faits-Divers → 2018 → janvier → 2 → Tapatapany
Redaction Midi Madagasikara 2 janvier 2018 0 Comment
# Notifirin’ny jiolahy mitam-basy ny lehilahy iray izay nipetraka tsara tao an-tranony, tetsy Ambohitsinjorano, tanàna iray ao amin’ny kaominina Antanetibe. Lavon’ny bala roa izy io ary nitsoaka ireo olon-dratsy nony avy eo. Mbola tsy fantatra mazava izay tena antony.
# Feno lozam-pifamoivoizana teny amin’ny lalam-pirenena faharoa. Isan’izany, teo Ambatolaona, nisy ankizy izay efa naratra ka saika hoentina aty Tana, kinanjo mbola nivadika indray ny fiara nandehanany. Omaly koa dia nivadika ny fiara fitaterana iray tetsy Ambohimangakely ka nandratra ny olona folo nentiny.
# Tao anatin’ny révéillon mihitsy no nitranga ny fanafihana tany Soavimbahoaka-Antsirabe 2. Voasambotra ny iray tamin’ireo jiolahy izay nataon’ny olona fitsaram-bahoaka avy hatrany ka maty tsy tsa-drano.